Tag: Madaxweyne | Sagal Radio Services
Madaxweynaha Jabuuti oo ku eedeeyay mucaaradka inay doonayaan fowdo iyo is dhex yaac
Madaxweynaha Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku eedeeyay mucaaradka dalkiisa inay doonayaan fowdo iyo is dhex yaac inay dalka u horseedaan, isagoo difaacay go’aanka uu mar afaraad uu isku sharaxayo madaxtinimada.
La-taliyeyaha Madaxweynaha oo lagu eedeeyay inuu ku xiran yahay Al-shabaab
Kormeerayaasha cuno-qabteynta hubka ee Somalia iyo Eritrea u qaabilsan QM ayaa ku eedeeyay mid ka mid ah la taliyeyaasha madaxweynaha Soomaaliya inuu xiriir la leeyahay Al-shabaab, uuna mas’uul ka ahaa hubka dowladda oo si qarsoodi ah loogu gacan-geliyay Al-shabaab.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo cambaareeyay hab dhaqanka ciidamada Kenya ee Kismaayo jooga
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud aya walaac ka muujiyay howlaha nabad ilaalineed ee ciidamada Kenya ay ku joogaan magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose, xilli ay dowladda Soomaaliya doonayso inay qabsato deegaannada kale ee ku yaalla gobolka Jubbada Hoose.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay Jaaliyadda Birmingham ee dalka Ingiriiska
Sagal Radio Services • News Report • May 11, 2013
Madaxweynaha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Shiikh Maxamuud oo maalmahan booqasho ku joogay dalka Ingiriiska ayaa wuxuu caawa la hadlay Soomaalida ku nool magaalada Birmingham oo isugu yimid in ay dhegeystaan khudbadda madaxweynaha Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh "Midnimada iyo deganaanta dalka, ayaan xoogga saareynaa"
Madaxweynaha Jamhurriyadda Federaalka Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa sheegay inay mudnaanta siinayaan, oo ayna ku dadaali doonaan laba arrimood oo kala ah midnimada iyo deggenaanta dalka.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo la kulmay ganacsato dooneysa inay maal-gashi ku sameysan Soomaaliya
Madaxweynaha Jamhurriyadda Federaalka Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud iyo xubnaha wafdigiisa, ayaa maanta London kula kulmay ganacsato isugu jira ajaabiin iyo Soomaali, kuwaas oo doonaya inay maal gashi ku sameystaan Soomaaliya.
Madaxweynaha Soomaaliya oo ka mid noqday 100 ruux ee ugu saameynta badan
Jariirada Times ee laga leeyahay dalka Maraykanka ayaa sanad walba soo bandhigta 100 qof ee sanadkii lasoo dhaafay saameynta ku yeeshay caalamka iyadoo Madaxweynaha Soomaaliya Xassan Shiikh Maxamuud jariiradu aqoonsatay inuu kamid ahaa 100kii qof ee caalamka saameynta ku yeeshay sanadkii lasoo dhaafay 2012 iyo sanadkan 2013, waxaana uu Liiska kaga jiraa tirada 46aad isaga oo dhanka Hoggaamiyaasha kaga jira tirada 5-aad
QM oo cuna-qabateynta hubka Soomaaliya ka qaadday & Madaxweyne Xasan Sheekh oo Muqdisho ku noqday
Sagal Radio Services • News Report • March 7, 2013
Madaxweynaha Jamhurriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdigiisii ee booqday dalka Qadar, ayaa shalay galinkii dambe dib ugu noqday magaalada Muqdisho.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo dalka dib ugu noqday
Madaxweynaha Jamhuurriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta dib ugu noqday magaalada Muqdisho, ka dib socdaal maalmo qaatay oo uu ku kala tagay dalalka Sacuudiga iyo Mareykanka.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo ka warbixiyay heshiisyo ay Sudan la soo galeen
Madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shalay dib ugu soo laabtay magaalada Muqdisho, kadib booqasho labo maalmood uu ku tagay dalka Sudan ayaa faah faahin ka bixiyay heshiis uu la soo saxiixday dhigiisa Sudan.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Kenya sheegay in uu kala hadley inaan la dhibaateyn Soomaalida
Madaxweynaha Jamhuurriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, oo shalay dib ugu noqday magaalada Muqdisho, ka dib safarro uu ku kala tagay dalalka Uganda iyo Kenya, waxa uu sheegay in madaxdii uu la soo kulmay ay kala soo hadleen arrimaha dalka Soomaaliya.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo la kulmay Jaaliyadda Soomaalida ee Nayroobi
Madaxweynaha Jamhurriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa magaalada Nayroobi kula kulmay jaaliyadda Soomaaliyeed ee Nayroobi.
Madaxweyne Xasan Sheekh oo Madaxtooyada ku qaabilay wafdi QM ka socday
Sagal Radio Services • News Report • September 15, 2012
Madaxweynaha jamhuurriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, ayaa maanta aqalka madaxtooyada ee Villa Soomaaliya kulankiisii ugu horeeyey kula yeeshay wafdi heersare ah oo ka socday QM, kuwaas oo ugu hambalyeeyay xilka loo igmaday madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha cusub oo si weyn loo soo dhaweeyay
Sagal Radio Services • News Report • September 11, 2012
Dalalka Mareykanka, Ingiriiska, Jabuuti iyo ururo kale oo caalami ah, ayaa ka mid ah xubnaha sida aadka ah durbaba u soo dhaweeyey guushii madaxweynaha cusub ee Jamhuuriyadda Soomaaliya Md. Xasan Sheekh Maxamuud, oo Isniintii doorashadii ka dhacday Muqdisho ku guuleystay.
Sheekh Shariif iyo 7 musharax kale oo buuxiyay shuruudihii looga baahnaa musharixiinta xilka madaxtinnimo
Madaxweynaha Soomaaliya Shariif Sheekh Axmed, ayaa ka mid noqday xubnaha ka gudbay shurudihii la hor dhigay mushariixinta u taagan xilka madaxtinnimada dalka. Waxana Madaxweynuhu uu ku jiray liiska seddex ruux oo shalay galinkii dambe la shaaciyay inay shuruudihii soo buuxiyeen.